कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीले करोडौं भष्ट्राचार गरेको खुलासा, कहाँ र कसरी भयो भष्ट्राचारा ? (भिडियो सहित) – PanchKhal Online
Home/भिडियो/कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीले करोडौं भष्ट्राचार गरेको खुलासा, कहाँ र कसरी भयो भष्ट्राचारा ? (भिडियो सहित)
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीले करोडौं भष्ट्राचार गरेको खुलासा, कहाँ र कसरी भयो भष्ट्राचारा ? (भिडियो सहित)
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीकोे प्रदेश सरकारले करोडौं भष्ट्राचार गरेको खुलासा भएको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्ष रारा राष्ट्रिय महोत्सवको नाममा करोडौं भष्ट्राचार भएको खुलेको हो ।
अव हवाई जहाँजको कुरा गरौं । सुर्खेत देखि ताल्चा विमान स्थलसम्मको भाडा दर ३ हजार देखि ९ हजारसम्मको छ । त्यहाँ तारा एयर र नेपाल एयरलायन्सका जहाँजहरु सेवा दिइरहेका छन तर त्यो पनि भरपर्दो छैन । अव विकल्प हो हेलीकप्टरको । हेलीकप्टर पनि आर्मीको बाहेक चढ्ने कुरा छैन किन कि उनी मुख्यमन्त्री न परे ? सुर्खेतबाट मुगु गएको र मुगुबाट सुर्खेत झरेको अधिकतम २ लाख भन्दै धेरै पर्दैन । अव कुरो आयो खानाको अनुमान गरौं ३ जनाले खाना खाँदा दिनमा १० हजारकै खान्छन । अझ यसमा प्रदेशकी महिला प्रमुखलाईसंगै लगे त्यसमा केही थप्न सकिएला । अन्य केही खर्च जोडौ ३ लाखै पुग्यो । अन्य भन्नाले कार्यक्रता भेटघाट जिल्ला भ्रमण आदी इत्यादी ।
कुरा त्यती मात्रै होइन उनका मन्त्रीहरुको पनि लाखौं बेरुजु देखिएको छ । त्यो लाखौं वेरुजु मध्य केही लाख मुख्यमन्त्रीको भागमा पर्ने गरेको छ । ७२ लाख चोखो भष्ट्राचार गरेकै छन भने अन्य मन्त्रालयबाट आउने भागले गर्दौ उनले करोडौं भष्ट्राचार गरेको स्पष्ट हुन्छ । यस अघिपनि आफ्नी धर्म पत्निलाई खेताला शिक्षक खटाएर अर्को ठाउँमा जागीर खुवाई रकम हसुरेको तथा सामान्य औलामा चोटलागेका उनलाई जिल्ला स्थित शान्ति समितिबाट पूर्ण अपांगताको भत्ता बुझेर करोडौ राज्यको सम्पति लुटेको जगजाहेरै छ । अझ क्यान्टिनमेन्टको भष्ट्राचारको कुरै नगरौं । भष्ट्राचार गर्न सिपालु छन कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाही ।
मुख्यमन्त्रीको घर अगाडी बन्न लागेको रास्कोट सामुदायिक अस्पताल निमार्णका लागि संचारकर्मी रवि लामीछानेले सर्वसाधारणसंग गुहार माग्नुपर्ने थिएन । कहिले टेलिभिजबाट कराउने, कहिले विदेश भ्रमण गरेर पैसा उठाउने त कहिले को बन्छ करोडपतिमा गएर कर्णालीको बेइजेत हुने थिएन ।अझ भनौं आफ्नै गाउँमा बन्न लागेको हस्पिटलका लागि गुहार माग्न किन लगाएको होला भनेर मुख्यमन्त्रीको आलोचना र अपमान पनि हुने थिएन ।
मुख्यमन्त्रीले चाहेको खण्डमा करोड रुपैयाँ त्यो हस्पिटलका लागि खर्च गर्न कुनै आइतबार पर्खनु पर्ने थिएन । ७८ लाख भएको भए रास्कोटले सरकारी अस्पताल पाउने थियो र जनताले निशुल्क स्वास्थ्य शुविधा पाउने थिए । र जनताले मुख्यमन्त्रीको जयजयकार गाउने थिए । तर अहिले भष्ट्राचारीको विल्ला लागेको छ ।
भष्ट्राचार लुकाउनका लागि गरिएको यो हर्कदले उनको राजनीति धरापमा पर्ने स्पष्ट छ । आजसम्म नेकपाका कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज जनार्धन शर्माले मुख्यमन्त्री शाहीलाई संरक्षण गर्दै आइरहेका छन । यो घटनाले उग्र रुपलिएपछि उनीपनि ब्याग हुनसक्ने र महेन्द्रको राजनीति समाप्त हुने नेकपाका एक नेताको दावि छ ।
यस विषयमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीसंग कुरा गर्न खोज्दा उनको मोवाइल अफ थियो भने उनका स्वकिय सचिव खेम सिंहले बारम्बार फोन गर्दा पनि फोन उठाएनन् ।
हेर्नुहोस ज्ञानेन्द्र शाही पक्राउ पर्नुभन्दा अघि उनले गरेको भाषण